June | 2017 | Indrenionline.com
Monthly Archives: १६ असार २०७४, शुक्रबार २०:०२
बंगलाचुली गाँउपालिकामा बिजयी जनप्रतिनिधीहरु
गृहमन्त्री शर्मा र कतारका राजदुतबीच भेटवार्ता
काठमाडौं, १६ असार । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग नेपालका लागि कतारका राजदुत युसुफ बिन मोहमद अल हेलले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु गरेका छन् । आज शुक्रवार गृहमन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा कतार र नेपालबिचको मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध तथा आपसी समझदारीबारे दुबैपक्षबिच चर्चा भएको थियो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कतारको विकासमा नेपाली श्रमिकहरुको पनि लगानी भएकोले कतारको समृद्धीमा नेपाल पनि संतुष्ट भएकोे बताए । ...
दाङका एक गाउँपालिका र १५ वडामा माओवादी विजयी
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, १६ असार । जिल्लाको पछिल्लो मतपरिणम अनुसार माओवादी केन्द्रले दाङको एक गाउँपालिका र १५ वटा वडामा नेकपा माओवादी केन्द्रले विजयी हात पारेको छ । जिल्लाको वंगालाचुली गाउँपालिकामा माओवादीले विजयी हासिल गरेको छ भने गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३ र ८ मा माओवादी विजयी हात पारेको छ । गढवा गाउँपालिका वडा नं. २ को अध्यक्षमा नेकपा माओवादी ...
प्रदेश नम्बर पाँचमा माओवादीले कहाँ कहाँ जित्यो ?
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, १६ असार । स्थानीय तहको दोस्रो चरणमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर ५ का २१ स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ । रोल्पा १– देउराम घर्तीको प्यानल त्रिवेणी गाउँपालिका १ २–मीनबहादुर थापाको प्यानल रुन्टीगढी गाउँपालिका १ ३– आमबहादुर घर्तीको प्यानल, माडी गाउँपालिका १ ४– गोबर्धन घर्ती मगरको प्यानल, थवाङ गाउँपालिका ५ ५– बोमबहादुर पुनको प्यानल, दुई खोली गाउँपालिका १ ...
अपहरित व्यापारी राजकुमार श्रेष्ठको हत्या,चारजना पक्राऊ ६ जना फरार
गणेश आचार्य तुलसीपुर,१६ असार । २१ दिन अघी अपहरणमा परेका तुलसीरपुरका व्यापारी राजकुमार श्रेष्ठको शव फेला परेको छ । सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका ४ को जंगलमा उनको शव भेटिएको राप्ती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी ज्ञानविक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अपहरणमा संलग्न चारजनालाई प्रहरीले पक्राऊ गरेको छ । पक्राऊ परेकाहरुले राजकुमारको आफूहरुले हत्या गरेको बयान दिएका थिए । प्रहरीले उनिहरुलाई ...
बंगलाचुली गाँउपालिकामा माओवादी केन्द्र बिजयी
दाङ , १६ असार । दश स्थानीय तह रहेको दाङमा माओवादीले गाँउपालिका जितेर खाता खोलेको छ, सात गाँउपालिका भएको दाङमा माओवादीले बंगलाचुली गाँउपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा विजयी हासिल गरि खाता खोलेको हो । एक सय वडा रहेको दाङ हालसम्म वीस वडामा विजयी भएको माओवादीले दाङको बंगलाचुली गाँउपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका भक्तबहादुर वली विजयी भएका छन् भने उपाध्यक्षमा यमुना पुन विजयी ...
तुलसीपुरका व्यापारी श्रेष्ठको शव जंगलमा भेटियो
इन्द्रेणी संवाददाता दाङ, १६ असार । जेठ २६ गते अपहरणमा परेका दाङ तुलसीपुरका व्यापारी राजकुमार श्रेष्ठ मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । उनको शव सल्यानको पाथिभरा लेकको जंगलमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । अपहरणको आरोपमा केही व्यक्तिहरु पक्राउ भएका र उनीहरुकै वयानका आधारमा शव फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । तर उनीसँगै अपहरणमा परेका रणबहादुर घर्तिको अवस्था भने अझै ...
अख्तियारले महानिर्देशक शर्मासँग ३ अर्ब धरौटी माग्यो
काठमाडौँ, १६ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर निर्धारण अनियमितता आरोपमा पक्राउ परेका अन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग तीन अर्ब रुपियाँ धरौटी मागेको छ । अख्तियारले बयानका सिलसिलामा हालसम्म देखिएको अनियमितताको झन्डै दोब्बर रकम धरौटी मागेको हो । शर्माको मुद्दाको अनुसन्धान भने जारी छ । पहिलो चरणको बयान सकिएको छ । मागबमोजिम धरौटी रकम बुझाएमा शर्माले हिरासत नबसेर ...
बिरुवामा मृतक आमा,बुवा र आफन्तको जमघट
गोविन्द खड्का घोराही, १६ असार। ‘आमा’ शब्द स्टाटस लेखेर घोराही उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी राधा रिजालले विहिवार विहान फेसवुकमा विरुवा रोप्दै गरेको फोटा अपलोड गर्नुभयो । टिप्नी गर्नेहरुले जन्मभुमिको माया, एक घर एक विरुवा अभियान यस्तै यस्तै चलनचल्ती संग जोडे । रिजालको स्टाटसको अर्थ भने गम्भिर थियो । बराहक्षेत्र मावि वनगाउमा कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा सहित कर्मचारीहरुको टोलि पुग्यो । सापकोटाले आफ्ना ...
चुनावको मौकामा फोहर बाहिर
गोविन्द खड्का घोराही, १६ असार। दोश्रो चरणको चुनाव चलीरहेको बेला जथाभावि फोहर फाल्नेहरुले भने सकृय रहेको पाईएको छ । लस्करै हिडीरहेका मतदाताहरु घीनाउदै गरेकोे देखिन्थे । घोराही उपमहानगर पालिकाको बैंक रोड आसपासका केहि घरभित्रको फोहर मुल सडकमा थुपारीएको थियो । बिधुतपोल वरपर थुपारेको फोहरमा झिङा भन्किरहेका थिए । मतदानको दिन यातायात पुर्ण रुपमा बन्द हुने भएकाले फोहर उठेन । सबैले ...